KEDU ESI EME NDEPỤTA NKE EDEREDE NA OKWU - OKWU - 2019
Ịmepụta ndepụta ederede na MS Word
Ugbu a ọtụtụ ndị ọrụ nwere akwụkwọ obibi ụlọ. Na ya, ị nwere ike n'enweghi nsogbu ọ bụla iji bipụta akwụkwọ ndị dị mkpa ma ọ bụ akwụkwọ oji na nke ọcha. Ịmalite na ịhazi usoro a na-emekarị site na sistemụ. Ngwaọrụ ahụ wuru na-ewulite ọdụ ụgbọelu nke na-achịkwa nhazi faịlụ iji bipụta. Mgbe ufodu, enwere ike ma obu iziputa akwukwo, ya mere enwere nkpa ikpochapu uzo a. A na-arụ ọrụ a n'ụzọ abụọ.
Kọwaa nsụgharị mbipụta na Windows 10
Isiokwu a ga-atụle ụzọ abụọ maka ihichapụ queues. Nke mbụ bụ eluigwe na ala na-enye gị ohere ihichapụ akwụkwọ niile ma ọ bụ họrọ. Nke abụọ abụrụ uru mgbe usoro ọdịda agwụla ma faịlụ adịghị ehichapụ, n'otu aka ahụ, na ngwaọrụ ejikọrọ apụghị ịmalite ịrụ ọrụ ọ bụla. Ka anyị leba anya na nhọrọ ndị a n'ụzọ zuru ezu karị.
Usoro 1: Njirimara Mbipụta
Mkpakọrịta na ngwa mbipụta na sistemụ arụmọrụ Windows 10 na-ewere ọnọdụ site na iji ngwa ngwa. "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ". Ọ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ngwá ọrụ bara uru. Otu n'ime ha bụ maka ọrụ ahụ ma rụọ ọrụ na ọdụ ụgbọelu. Wepu ha site na o siri ike:
Chọta akara ngosi mpempe akwụkwọ na ngalaba ọrụ, pịa aka na nri ma họrọ ngwaọrụ iji na listi.
Mgbanwe window ga-emeghe. N'ebe a, ị ga-ahụ ndepụta nke akwụkwọ niile ozugbo. Ọ bụrụ na ịchọrọ wepu naanị otu, pịa aka nri ma họrọ "Kagbuo".
N'ọnọdụ ahụ mgbe enwere otutu faịlụ ma ọ bụrụ na ọ gaghị adị mfe iji kpochapụ ha n'otu n'otu, gbasaa taabụ ahụ "Onye nbipute" ma rụọ ọrụ ahụ "Wepụ Print Queue".
N'ụzọ dị mwute, akara ngosi ahụ a kpọtụrụ aha n'elu anaghị egosi ya mgbe niile. Na ọnọdụ a, ị nwere ike mepee nhọrọ nchịkọta mpaghara ma chọpụta ọdịiche dị na ya:
Gaa "Malite" na imeghe "Nhọrọ"site na ịpị bọtịnụ ahụ n'ụdị nkedo.
Ndepụta nke nhọrọ Windows gosipụtara. Ebe ị nwere mmasị na ngalaba. "Ngwaọrụ".
N'elu aka ekpe, gaa na ụdị "Ndị na-ebi akwụkwọ na ndị nyocha".
Na nchịkọta nhọrọ, chọta ngwa ndị ịchọrọ iwepụ ọdụ ụkwụ. Pịa aha ya LKM wee họrọ "Mepee anya".
Lee kwa: Na-agbakwunye Windows
Ugbu a, ị ga-esi na windo ahụ na parameters. Ọrụ na ya bụ otu ihe ahụ dịka e gosipụtara na ntụziaka ndị gara aga.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụzọ mbụ dị mfe na mkpochapụ ma ọ dịghị achọ oge dị ukwuu, ịdị ọcha na-ewe ihe ole na ole. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ọ na-eme na ihe ndekọ ndị a adịghị ehichapụ. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ịṅa ntị na ntuziaka ndị a.
Usoro 2: nhichapụ nchịkọta nke mbipute mbipụta
Ije ozi bụ maka ọrụ ziri ezi nke onye nbipute ahụ. Onye nchịkọta edemede. N'ihi ya, a na-ahazi ọdụ ụgbọelu, a na-eziga akwụkwọ na mbipute ahụ, na-arụ ọrụ ọzọ. Usoro dị iche iche ma ọ bụ ngwanrọ ngwanrọ na ngwaọrụ n'onwe ya na-akpalite mkpokọta algorithm nile, nke mere na faịlụ oge na-adịghị agafe ma na-egbochi ịrụ ọrụ nke ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu ndị dị otú ahụ, ịkwesịrị iji aka wepụ ha, ma ị nwere ike ime nke a dị ka ndị a:
Meghee "Malite" na ụdị mmanya nchọta "Iwu Iwu", pịa ihe na-apụta, pịa aka nri ma na-agba ọsọ ngwa ahụ dị ka onye nchịkwa.
Mbụ anyị kwụsịrị ọrụ n'onwe ya. Onye nchịkọta edemede. Ndị ọrụ maka nke ankwụsị nke nkwụ. Tinye ya ma pịa igodo Tinye.
Mgbe nkwụsị nke ọma ị chọrọ iwu.del / s / f / q C: Windows System32 spool PRINTERS *. *- ọ bụ ọrụ maka ihichapụ faịlụ niile nwa oge.
Mgbe ịmechara usoro iwepụ, ị ga-eji aka lelee nchekwa nchekwa nke data a. Emechila "Iwu Iwu"onye na-eme nchọpụta na-emeghe ma chọpụta ihe niile na-adịru ogeC: Windows System32 spool PRINTERS
Họta ha niile, pịa aka nri wee họrọ "Hichapụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, laghachi "Iwu Iwu" ma malite ọrụ mbipụta site na iwu ahụntanye ụfụ ụbụrụ
Usoro a na-enye gị ohere ikpochapụ eserese mbipụta, ọbụlagodi na ikpe ebe ihe ndị dị na ya na-arapara. Debanye ngwaọrụ ma malite ịrụ ọrụ ọzọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ebi akwụkwọ ma ọ bụ onye na-ahụ maka njikwa ngwa ngwa na-eche mkpa ọ dị iji dochie eserese mbipụta ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọbụna onye ọrụ na-enweghị uche ga - enwe ike ịrụzu ọrụ a, ụzọ nke abụọ ga - enyere gị aka ịnagide ihe ndị dị na nkwụsịtụ ole na ole.
Kwesịrị iji nhazi ngwa ngwa